သတင်းများ | Myanmar Climate Change Alliance
ဇန်နဝါရီ 12, 2018 ဇန်နဝါရီ 12, 2018
မကြာမီတွင် ထုတ်ပြန်ပေးတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၁၆-၂၀၃၀) တွင် ပါဝင်သည့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍ (၆) ခု၏ မူဝါဒ အကျဉ်းချုပ်များအား MCCA website တွင် အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် ရရှိဖတ်ရှိုနိုင်ပါသည်။ ဤ link တွင် ဝင်ရောက်၍ download ရယူနိုင်ပါသည်။ ထိုမဟာဗျူဟာသည် (၁) စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး၊(၂) ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းသည့် ဂေဟစနစ်ဖြစ်စေရေး၊ (၃) စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်၍ ခံနိုင်ရည်ရှိသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စနစ်များ၊ (၄) ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော မြို့ကြီးများ၊ (၅) ပြည်သူလူထုကျန်းမာရေးနှင့် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း နှင့် (၆) ပညာရေးသိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ စသည့် ကဏ္ဍ (၆) ခုအား လွှမ်းခြုံနိုင်ပါသည်။ MCCA library … Read more…
ဒီဇင်ဘာ 8, 2017 ဇန်နဝါရီ 12, 2018
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်နေပါသလဲ? ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းများ နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် နည်းလမ်းများက ဘာတွေလဲ? ဒါတွေကိုသိဖို့အတွက် “ပူနွေးလာသော နေ့ရက်များ- “ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာတဲ့ မြန်မာ”ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ပြီး အဖြေရှာကြည့်ပါလား။ ဤမှတ်တမ်းဗီဒီယိုကို European Union ၏ ထောက်ပံ့မှုဖြင့် Yangon Film School မှ သဘာဝသံယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ (MCCA) တို့အတွက် ရိုက်ကူး ထုတ်လုပ်ပါသည်။ သင်သဘောကျနှစ်သက်ပါက လွတ်လပ်စွာ မျှဝေနိုင်ပါသည်။ ပြီးတော့ သင့်၏ ထင်မြင် ယူဆချက်များအား ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောကြားပေးစေလိုပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၏ မကောင်းသောသက်ရောက်မှုများကို ကမ္ဘာပေါ်တွင် အများဆုံး ကြုံတွေ့ရနိုင်မည့် နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လူပေါင်း ၁၃၀,၀၀၀ ထက်ပိုမို၍ သေဆုံးစေခဲ့သော … Read more…
Categories Activities, Infographic, လုပ်ငန်းစဉ်များ, သတင်းများLeaveacomment
စက်တင်ဘာ 18, 2017 စက်တင်ဘာ 18, 2017
MCCA၊ ECD နှင့် International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) တို့သည် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ခံစားရလွယ်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက် ရန် ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ(ဖလမ်း၊ ဟားခါး၊ နှင့် ထန်းတလန်) မြို့ (၃) မြို့သို့ လေ့လာရေးခရီးသွားရောက်ခဲ့ကြပြီး ထိုလေ့လာ တွေ့ရှိချက်များမှတဆင့် မြို့နယ်တစ်မြိုအား ရွေးချယ်၍ ဆန်းစစ်ခြင်းအား ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ မြို့နယ်တစ်မြို့ ရွေးချယ်ခြင်းအစီအစဉ်အား ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်၍ မြို့နယ် ရွေးချယ်မှု ပြီးလျှင်ပြီးခြင်း လေ့လာဆန်းစစ်မှုများအား ချက်ချင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် မိုးပြင်းထန်စွာ ရွာသွန်းနေမှုများ၊ ပုံသဏ္ဍန်မမှန်သော မိုးရွာသွန်းမှု ပြသနာများ၊ အပူချိန် မြင့်မားနေမှုများ၊ ပြင်းထန်သောလေတိုက်ခတ်မှုများ ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် မြေပြိုကျမှုများ … Read more…
Categories Activities1 Comment
မြန်မာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရေးအကြောင်း လေ့လာနိုင်ရန် စုစည်းထား သော “Tool Box”
ဩဂုတ် 9, 2017
MCCA သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေး ပြသနာများအား လေ့လာနိုင်ရန် ၎င်း၏ “Tool Box” အသစ်အား နောက်ဆုံးအဆင့် ပြုစုထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ “Tool Box” တွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်ပါသည်။ (၁) သင်တန်း (၅) ရက်စာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း (၁။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းအားနားလည်နိုင်ရန် ၂။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း သက်ရောက်မှုများ၊ ၃။ မြို့နယ်များ၌ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းအား တိုင်းတာခြင်း၊ ၄။ မြို့နယ်များအတွက်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် အစီအမံရေးဆွဲခြင်း (၂) သင်တန်းဆရာလက်စွဲ ။ ထိုလက်စွဲစာအုပ်သည် မည်သည့်သင်တန်းဆရာဖြစ်စေ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအား အလွယ်တကူ သင်ကြားဖြန့်ဝေနိုင်ရန် အလေ့အကျင့် အတွေအကြုံကောင်းများ ရစေပါသည်။ (၃) သင်တန်းသားများအတွက် လက်စွဲစာအုပ်။ သင့်အနေဖြင့် သင်သင်ယူခဲ့သမျှအား အကောင်အထည်ဖော်ရန် … Read more…
မြန်မာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပြန်လည်တိုးတတ်ကောင်းမွန်သောမြို့ပြစနစ်-စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ် စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း
ဇူလိုင် 18, 2017 ဇူလိုင် 24, 2017
မြန်မာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပြန်လည်တိုးတတ်ကောင်းမွန်သောမြို့ပြစနစ်-စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ် စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း">
နေပြည်တော်, ဇွန်လ ၂၀၁၇- MCCA သည် မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် မြို့နယ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှု အစီအစဉ်ကို စတင်ရန်အတည်ပြု နိုင်သည့်အတွက် များစွာ ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ မြန်မာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ကဏ္ဍအလိုက် ရလာဒ်များ အခန်း(၄) တွင် ပါဝင်သော “ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အားလုံးပါဝင်သော ရေရှည်တည်တံ့သည့် မြို့ကြီးများနှင့် မြို့တော်များတွင် ပြည်သူလူထု အခြေချနေထိုင်မှု” ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဤအစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲပါသည်။ ဤအစီအစဉ်တွင် မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီများနှင့် မြို့နယ်များ၊ မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ ဖြိုးမှု ဦးစီးဌာန၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ အဆောက်အဦဌာန နှင့် အခြားသော ဌာနများပါဝင်ပါသည်။ အစီအစဉ်အရ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုနှင့် မြို့ပြစီမံကိန်း ရေးဆွဲရာတွင် တိုးတတ်ကောင်းမွန်သော အစီအမံများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲနိုင်ရန် နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် လေ့လာရေး အစီအစဉ် နှင့် … Read more…
MCCA ၏ အောင်မြင်မှုများ
ဇွန် 21, 2017
နေပြည်တော်, မတ် ၂၀၁၇ – MCCA သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်များစွာကတည်းက (၁) ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု ဆိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုတ များအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ (၂) ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု များအား ညွှန်ကြားနိုင်ရန်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့် မူဝါဒများ ချမှတ်ခြင်း၊ (၃) ပြည်သူလူထုအား ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်လျော ညီထွေစွာ နေထိုင်နိုင်ရေး တို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ပြီးစီးသော ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်သော လုပ်ငန်းများနှင့် နောင်လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား “ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ MCCA ၏ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများ ” ကို ဤနေရာတွင်http://myanmarccalliance.org/mcca/wp-content/uploads/2015/12/MCCA-Updates_MYA-March-17low.pdf ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ဇွန် 13, 2017 ဇွန် 14, 2017
နေပြည်တော်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့ ၂၀၁၇၊ ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ “ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းများသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ခြိမ်းခြောက်နေသော အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်” ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးမှ ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနေ့တွင် မြန်မာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် နှင့် ဆက်စပ်၍ မြန်မာအမျိုးသားအဆင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒအား ထုတ်ဝေနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ ကြပါသည်။ MCCA သည် စီမံကိန်းတိုးတတ်မှု သတင်းအချက်အလက် များ ဖြစ်သော “ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အသိပညာ ပေးမှုမြှင့်တင်ပေးခြင်း အစီရင်ခံစာ”၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်နှင့် လပွတ္တာမြို့နယ်တို့တွင် “ရာသီဥတုဒဏ် ထိခိုက် ခံစားရလွယ်မှု လေ့လာဆန်းစစ်ချက်”၊ “ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဆန်းစစ်ချက်”၊ “မြန်မာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ နှင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်မူကြမ်း” (မြန်မာ၊အင်္ဂလိပ်)၊ “မြန်မာအမျိုးသားအဆင့် … Read more…
Categories သတင်းများLeaveacomment
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 7, 2017
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Myanmar Climate Change Alliance (UN-Habitat, UN-Environment နှင့် သံယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန) WWF နှင့် Columbia University တို့ ပူးပေါင်း၍ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့် ပြည်သူများမှ ဦးဆောင်ပြီး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လပွတ္တာမြို့နယ်၌ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ထိခိုက်ခံစားရနိုင်မှု တိုင်းတာ စစ်ဆေးခြင်း များကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ လပွတ္တာမြို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်တောင်ပိုင်း တွင်တည်ရှိပြီး လူဦးရေ ၃၁၅၀၀၀ခန့် အခြေချ နေထိုင်ကြပါသည်။ မြေပြန့်လွင်ပြင် အနေအထားလွှမ်းမိုးမှုရှိပြီး မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသွင်ပြင်လက္ခဏာများ ရှိ၍ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခိုက် ခံရမှုကြောင့် ကြီးကြီးမားမား ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ ယနေ့အချိန်အထိ ထိုတိုက်ခိုက်ခံရမှုဒဏ်မှု ပြန်လည်ကုစားရန် … Read more…
Categories Activities, လုပ်ငန်းစဉ်များ, အောင်မြင်မှုများLeaveacomment